WINDOWS 10 OKTOBHA 2018 UHLAZIYO LWEEMPAWU (7 EZONGEZIWEYO KUHLOBO LWE-1809) - WINDOWS 10
Windows 10 Oktobha 2018 Uhlaziyo lweempawu (7 ezongeziweyo kuhlobo lwe-1809)
IMicrosoft ekugqibeleni namhlanje (nge-13 kaNovemba 2018) ikhuphe kwakhona uhlaziyo lwayo lwesiqingatha sonyaka se Windows 10 ngo-Okthobha u-2018 uHlaziyo (aka Windows 10 Inguqulelo 1809) eQala ukukhupha uhlaziyo luye kwiiPC ngoku kwiiveki ezimbalwa ezizayo. Olu luhlu lwesithandathu lokuhlaziya oluchukumisa kwikona nganye ye-OS ebandakanya utshintsho oluninzi olubonakalayo, kunye neempawu ezintsha ezimalunga nenkqubo yempilo, ukugcinwa, ukwenziwa ngokwezifiso, ukhuseleko kunye nemveliso ukuphucula amava onke. Nantsi le post siqokelele uNtsha Windows 10 Oktobha 2018 Uhlaziyo lweempawu kunye nezixhasi ezaziswa kwiWindows 10 aka 1809.
Iziqulatho umboniso 1 Umxholo omnyama weFayile yokuKhangela (intle kakhulu) Mbini Ifowuni yakho usetyenziso (Inkwenkwezi yohlaziyo lwamva nje) 3 Ibhodi eqhotyoshwayo enikwe ilifu (Vumelanisa iiAcross Devices) 4 Isixhobo esitsha se-Screenshot (Snip & Sketch) ekugqibeleni sithathe indawo yeSnip 5 Khangela ukujonga kuqala kwiMenu yokuQala (Iziphumo eziluncedo) 6 Indawo yokuGcina iyandiswa kwi-OneDrive yokucoca ngokuzenzekelayo 7 Yenza okubhaliweyo kube kukhulu (Guqula ubungakanani befonti yenkqubo) 8 Ukuphuculwa kweMicrosoft Edge 9 Okokugqibela, incwadana yokubhala Fumana uthando 9.1 Olunye utshintsho oluncinci lubandakanya…
Umxholo omnyama weFayile yokuKhangela (intle kakhulu)
Eli lelona nqaku lilindelwe kakhulu, iMicrosoft yaziswa ngo-Okthobha 2018 uhlaziyo. Ngoku Windows 10 Inguqulelo 1809 Xa uvumela umxholo omnyama ukusuka Useto> Ukwenza ubuqu> Imibala , skrolela ezantsi kunye Khetha imowudi yenkqubo yakho emiselweyo , khetha Kumnyama . Oku kuyakwenza yenza umxholo omnyama weFayile Explorer, kubandakanya imenyu yentsingiselo ebonakala xa ucofa ekunene kwidesktop kunye nakwincoko yababini yokungena.
ikhompyuter ngokukhawuleza iqala kwakhona windows 10
Ifowuni yakho usetyenziso (Inkwenkwezi yohlaziyo lwamva nje)
Olu lolunye longezo olukhulu kuhlaziyo lwenqaku lwamva nje apho iMicrosoft izame ukusondela kwizixhobo zeAndriod kunye ne-ISO. Windows 10 Uhlaziyo luka-Okthobha u-2018 wazise ngeFowuni yakho, eyokuhlaziywa kwe 'Ifowuni yakho' ekuvumela ukuba uqhagamshele i-Android yakho, i-handsets ye-IOs Windows 10. I-App entsha iqhagamshela eyakho Windows 10 ikhompyuter kwifowuni yakho ye-Android kwaye ikuvumela ukuba ujonge eyakho uninzi lweefoto eziphathwayo, Vumela ukuthumela imiyalezo kwiWindows PC, ikopi kwaye uncamathisele ngqo kwifowuni kwizicelo ezikwidesktop kunye nokubhaliweyo kwiPC.
Qaphela: Ukuze usebenzise eli nqaku kufuneka ube nefowuni ye-Android eqhuba i-Android 7.0 okanye entsha.
Ukuseta, vula Ifowuni yakho usetyenziso kwi Windows 10, (kufuneka usayine ungene ngeakhawunti yeMicrosoft). Emva koko faka inombolo yakho yefowuni kwi-app kwaye ithumela isicatshulwa osisebenzisayo ukukhuphela isiqalisi seMicrosoft kwi-Android.
Usenakho ukuqhagamshela i-iPhone yakho kwiWindows kwiFowuni yakho, kodwa abasebenzisi be-iPhone abanakho ukufikelela kwiifoto zeefowuni zabo onokuzithumela kuphela amakhonkco kwi-app yeEdge iOS ukuvula kwiEdge kwiPC yakho.
IMicrosoft ikwadibanisa imisebenzi yakho yeselfowuni kwi Umda wexesha , Inqaku elikhutshiweyo ngo-Epreli Windows 10 uhlaziyo. Umda wexesha sele unike amandla okuskrolela umva, phantse ifilimu-njenge-strip, ngokusebenzisa iOfisi yangaphambili kunye nemisebenzi ye-Edge. Ngoku, ixhaswe imisebenzi ye-iOS kunye ne-Android njengamaxwebhu asandula kusetyenziswa eOfisi kunye namaphepha eWebhu aya kubonakala kwiWindows 10 desktop, nayo.
Ibhodi eqhotyoshwayo enikwe ilifu (Vumelanisa iiAcross Devices)
Windows 10 Okthobha 2018 Hlaziya ngaphezulu kwamava ebhodi eqhotyoshwayo, ephakamisa ilifu ukukopa kunye nokuncamathisela umxholo kwizixhobo zonke. Ithetha ngoku Windows 10 Inguqulelo yabasebenzisi be1809 bakopa umxholo osuka kwiapp kunye nokuncamathisela kwizixhobo zefowuni ezinje ngeePhones okanye izixhobo eziphathwayo. Ukongeza, ibhodi eqhotyoshwayo entsha ikwazisa ujongano olutsha (onokuthi ulubize usebenzisa Isitshixo seWindows + V indlela emfutshane) ukujonga imbali yakho, uncamathisele umxholo wangaphambili, kwaye ucofe izinto onokufuna ukuzincamathisela yonke imihla.
Nangona kunjalo ukubanakho kweClipboard Sync kuzo zonke izixhobo, Ukukhubazeka ngokungagqibekanga (Ngenxa yesizathu sangasese) Jonga indlela yokwenza Yenza ukuvumelanisa kwebhodi eqhotyoshwayo kuzo zonke izixhobo .
Isixhobo esitsha se-Screenshot (Snip & Sketch) ekugqibeleni sithathe indawo yeSnip
Kutshanje Windows 10 uhlaziyo lwenqaku, lazisa indlela entsha (i-Snip & Sketch App) yokuthatha umfanekiso-skrini osebenza ngokufana nesixhobo esidala sokuthwebula umfanekiso kodwa i-Snip entsha kunye ne-Sketch App yandisa amava kwaye yongeza ezinye izibonelelo, ezinje hlaziya kwiVenkile kaMicrosoft (endaweni yokuba ulinde uguqulelo olutsha lweWindows 10), yiza nesixhobo sokuhlutha kunye nazo zonke izixhobo ezisisiseko ozifunayo. Kwakhona usebenzisa i-icon yokwabelana kwikona ephezulu ngasekunene evumela uluhlu lweeapps, abantu kunye nezixhobo onokwabelana ngazo nefayile.
ungavula ifayile ye- Uhlelo lokusebenza lweSnip kunye neSketch ukusuka kwimenyu yokuqala yokukhangela, chwetheza snip kunye noMzobo kwaye ukhethe kwimiphumo yokukhangela. okanye usebenzise isitshixo se combo ye Isitshixo seWindows + Shift + S ukuqala ngqo umpu wommandla. Jonga ukuba ungakwenza njani Sebenzisa Windows 10 Snip & Sketch ukuthatha izikrini
Khangela ukujonga kuqala kwiMenu yokuQala (Iziphumo eziluncedo)
Ngohlaziyo lwamva nje, Windows 10 amava ophando iye yagqitywa ukubonelela ngeziphumo eziluncedo ngakumbi kukhangelo lwasekhaya kunye nolwewebhu. Ngotshintsho lweWindows 1809 Xa uqala ukuthayipha ukukhangela into, iiWindows ngoku zikubonisa ipaneli yokujonga kuqala ebonisa ulwazi olongezelelekileyo. Ujongano olutsha luneendidi zokukhangela, icandelo lokubuyela apho ubuhlala khona kwiifayile zamva nje kunye nebha yokukhangela yakudala yokukhangela.
Xa ukhangela usetyenziso okanye uxwebhu, ipaneli elungileyo ngoku iya kuthi gqi ngezenzo eziqhelekileyo, kubandakanya ukhetho lokusebenzisa usetyenziso njengomlawuli, ulwazi ngefayile, njengomendo kunye nexesha lokugqibela koxwebhu ukulungiswa, kunye nokunye.
Indawo yokuGcina iyandiswa kwi-OneDrive yokucoca ngokuzenzekelayo
Indawo yokuGcina ikunceda ukhulule indawo ngokuzenzekelayo xa isixhobo sakho siqala ukuphuma kwindawo. Kwaye ngoku Windows 10 Okthobha 2018 uhlaziyo lweSense yokuGcina ngoku unokuzisusa ngokuzenzekelayo 'iifayile ezifunwayo' kwi-OneDrive ongakhange uyivule okwethutyana kwiPC yakho ukukhulula indawo. Ziza kuphinda zikhutshelwe xa uzama ukuvula kwakhona.
Into ayizi ngokuzenzekelayo isebenze ngohlaziyo. Ukuze usebenzise iSense yokuGcina, abasebenzisi kuya kufuneka bayivule ngesandla kwimenyu yokuCwangcisa. Ukwenza oku, intloko kwiisetingi> Inkqubo> yoGcino, vumela ukuGcinwa kweSense, cofa u 'Guqula indlela esikhulula ngayo indawo ngokuzenzekelayo,' kwaye ukhethe xa ufuna ukususa iifayile ze-OneDrive phantsi komxholo wefu okhoyo ngoku.
le app ikuthintela ukuba ungaqaleli phantsi
Yenza okubhaliweyo kube kukhulu (Guqula ubungakanani befonti yenkqubo)
Windows 10 Inguqulelo 1809 ikwabandakanya ukubanakho kokunyusa ubungakanani bokubhaliweyo kuyo yonke le nkqubo. Endaweni yokumba useto lokubonisa kunye nokulungelelanisa ukukala, intloko uye Useto> Uncedo lokuFikelela> Umboniso, sebenzisa isilayidi ukulungelelanisa ubungakanani bokubhaliweyo, kwaye ubethe Faka isicelo .
I-interface ine-slider entle kunye nemboniso eyenza ukuba kube lula ukufumana ubungakanani befonti elungele wena. Kulula kakhulu ukutshintsha bonke ubungakanani befonti kwi Windows 10 Okthobha 2018 Uhlaziyo.
Ukuphuculwa kweMicrosoft Edge
Ngayo yonke inguqulelo entsha Windows 10, U-Edge ufumana isabelo esifanelekileyo sohlaziyo. Le nguqulo ikwabandakanya imenyu entsha yebar esecaleni ekucwangciseni ngcono iimpawu zebrawuza ezinje ngeeFavorites, uLuhlu lokuFunda, kunye neMbali.
Xa ucofa kwi '….' Kwisixhobo seMicrosoft Edge, ngoku uyakufumana umyalelo wemenyu omtsha njengo 'Ithebhu eNtsha' kunye 'neWindows entsha'. Kwaye entsha imenyu yezicwangciso eziphuculweyo owaphula iinketho zibe zii-subpages, ezilungiselelwe ngokwamacandelo.
Kukwakho nokuphuculwa kwe-PDF Reader eyakhelwe-ngaphakathi ye-Edge, Isikhangeli se-Edge ngoku siqulethe inqaku lesichazi-magama kwimowudi yokufunda, kunye nesixhobo esigxile kumgca kunye nokuphuculwa kokusebenza okungaphantsi kwe-hood. Kwaye kunokubizwa ngokuba yeyona nto iphambili- amandla okumisa ukudlala iividiyo, umculo kunye nezinye izinto. Unokufunda iNqaku lethu elizinikeleyo Iimpawu zeMicrosoft Edge kunye notshintsho ngo-Okthobha 2018 uhlaziyo ukusuka apha
Okokugqibela, incwadana yokubhala Fumana uthando
Umhleli wombhalo omiyo Incwadana ekugqibeleni ifumana uthando ngo-Okthobha u-2018 uhlaziyo , Ukuxhasa isiphelo somgca seMacintosh kunye neUnix / Linux kwaye ikuvumela ukuba uvule iifayile ezenziwe kwiLinux okanye kwiMac kwiNotepad kwaye uzinikeze ngokufanelekileyo, endaweni yokuba ziboniswe kumgca womgca omnye.
Kukho inqaku elitsha lokusondeza, nalo. Cofa nje Jonga> Sondeza kwaye usebenzise ukhetho ukusondeza ngaphakathi nangaphandle. Unokubamba kwakhona i-Ctrl kwaye ucinezele uphawu lokudibanisa (+), uphawu lokususa (-), okanye zero (0) amaqhosha okusondeza, ukusondeza, okanye ukuseta kwakhona kwinqanaba lokusondeza okungagqibekanga. Unokujikeleza ivili lakho lemouse ngelixa ubambe iqhosha leCtrl phantsi ukusondeza ngaphakathi nangaphandle.
Enye yezinto 'ezinomdla' iMicrosoft eyongezwe kwiNotepad apho umsebenzisi anokuqaqambisa isicatshulwa kwaye asikhangele kwi-Bing.
Kwakhona iMicrosoft yongeze ukhetho 'Isongele' Umsebenzi 'Fumana / Buyisela'. Incwadana yokubhalela iya kugcina amaxabiso angene ngaphambili kunye neebhokisi zokujonga kwaye uzisebenzise ngokuzenzekelayo xa uvula ibhokisi yencoko yababini. Ukongeza, xa ukhetha okubhaliweyo kwaye uvula i 'Khangela' ibhokisi yencoko yababini, igama elikhethiweyo okanye isiqwenga sesicatshulwa sizakubekwa ngokuzenzekelayo kumhlaba wombuzo
Olunye utshintsho oluncinci lubandakanya…
Kukho iinguqu ezimbalwa ezincinci onokuthi uziqaphele, njengokuthiya ngokutsha kweWindows Defender kuKhuseleko lweWindows kunye ne-emojis entsha.
Imenyu yeBluetooth ngoku ibonisa ubomi bebhetri yazo zonke izixhobo ezixhunyiwe
Inqaku lokuNceda ukuGxila kuLwazi ngokuNceda kunceda ukuphucula amava okudlala kwisikrini esigcweleyo
The Windows 10 Umdlalo weBar ngoku uza kubonisa ukusetyenziswa kwe-CPU kunye ne-GPU, kunye nesakhelo esiqhelekileyo ngomzuzwana (fps) esisetyenziswe ngexesha lokudlala. IBar yomdlalo ikwaphucula ulawulo lwomsindo.
Hlaziya iVidiyo eNtsha esekwe kwindawo yokuKhanyisa ngokuzenzekelayo ehlengahlengisa useto lwevidiyo yakho ngokusekwe kuseto lwakho lokukhanya
Umphathi weSebenzi ngoku ubandakanya iikholamu ezimbini ezitsha kwiithebhu 'zeNkqubo' ukubonisa ifuthe lamandla enkqubo yokusebenza kwinkqubo yabo.
Umhleli wobhaliso uya kufumana inqaku lokucebisa ngokuzenzekelayo. Xa uchwetheza indawo yesitshixo, iya kuphakamisa amaqhosha okuzalisa ngokuzenzekelayo.
UMicrosoft wongeze i Ikhibhodi yeSwiftKey , i-iOS ethandwa kakhulu kunye nesicelo sekhibhodi ye-Android kumzamo wokuphucula ukuthayipha kwizixhobo zayo ngescreen sokuchukumisa.
ikhibhodi kunye nempuku ayisebenzi emva windows 10 hlaziya
Yeyiphi into eluncedo kakhulu kolu hlaziyo lwenqaku? Sazise ngezimvo ezingezantsi Funda kwakhona
Windows 10 Okthobha 2018 uhlaziyo lwenguqulelo ye-1809 yemibuzo eqhelekileyo kunye neempendulo .
Windows 10 Okthobha 2018 uhlaziyo lwenguqulelo yoKhokelo lokuSombulula ingxaki kwi-1809 !!!
Hlaziya inqaku ku Windows 10 Inguqulelo ye-1809 (ngo-Okthobha u-2018 uhlaziyo) ayiphumelelanga ukuyifaka
Qaphela: Windows 10 Okthobha 2018 uhlaziyo lwenguqulo 1809 iyafumaneka ngokuKhuphela, jonga Uyifumana njani ngoku .
windows ayizukucima emva kohlaziyo
Iqhosha lemicrosoft lokufaka lifakwe ngwevu
google chrome wayeka ukusebenza windows 7
iifestile ezinamathele kwisikrini sokwamkela